खेल संसार – Page 16 – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२६ असार २०७७, शुक्रबार ०६:५५ English
विश्वकप क्रिकेट, इङल्यान्ड बलियो स्थितिमा ४ असार २०७६, बुधबार ०२:५४
विश्वकप छनौट खेल्ने नेपाली टोलिको घोषणा, खेल तालिका सहित ३ असार २०७६, मंगलवार १३:५९
काठमाडौँ, ३ असार । जुलाई २० देखि २८ सम्म सिंगापुरमा आयोजना हुने आईसीसी टि–२० विश्वकप छनौट (एसिया फाइनल) को लागि प्रारम्भिक नेपाली टोलिको घोषणा भएको छ । २५ सदस्यीय टिमको घोषणा गरिएको हो । अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदका प्रतिनिधि अमिनिल इस्लाम, प्रमुख प्रशिक्षक उमेश पटवाल र कप्तान पारस..
म्यान्चेस्टर, ३ असार । जारी विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगीतामा आज आयोजक इंग्ल्यान्डले तुलनात्मक रुपमा निकै कमजोर देखिएको अफगानिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । म्यान्चेस्टरमा नेपाली समयअनुसार ३ः१५ बजे खेल सुरु हुनेछ । इंग्ल्यान्ड चौथो जितको खोजिमा हुनेछ भने अफगानिस्तान पहिलो जित..
कोपा अमेरिका, सुआरेज र काभानीको गोलले उरुग्वे विजयी
ब्राजिल, २ असार (एएफपी)। ब्राजिलमा जारी दक्षिण अमेरिकाको प्रतिष्ठित कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार भएको खेलमा उरुग्वे विजयी भएको छ । उरुग्वेले १० खेलाडीमा सीमित भएको इक्वेडरलाई ४–० गोल अन्तरले पराजित गरेको हो । समूह ग को यस प्रतिस्पर्धामा उरुग्वेका तर्फबाट लुइस..
विश्वकप क्रिकेटमा वेष्ट इन्डिज र बंगलादेश खेल्दै २ असार २०७६, सोमबार १०:४६
इंग्ल्यान्ड, २ असार । विश्वकप क्रिकेटमा आज वेष्ट इन्डिज र बंगलादेश भिड्दैछन् । आजको खेल समयअनुसार दिउँसो ३ः१५ बजे सुरु हुनेछ । बंगलादेश र वेष्ट इन्डिज दुवै टिमले दुई खेलमा हार, एक खेलमा जित र एक खेलमा भने अंक बाँडेका छन् । बंगलादेश टिम मश्रफे मोरटजा (कप्तान), अबु जायद, लिटोन दास,..
विश्वकप क्रिकेटमा सदाबहार प्रतिष्पर्धी पाकिस्तानलाई हराउदै भारत विजयी
म्यान्चेस्टर, २ असार । विश्वकप क्रिकेटमा भारतसँग पाकिस्तान पराजित भएको छ । इंग्ल्यान्डको म्यान्चेस्टरमा भएको खेलमा भारतसँग पाकिस्तान ८९ रनले पराजित भएको हो । ३३७ रनको लक्ष्य पछ्याउँदै ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले ब्याटिङ गरिरहेकै बेला पानी परेपछि खेल ४० ओभरमा छोट्याइएको थियो । अब..
कोपा अमेरिका फुटबल, अर्जेन्टिना स्तब्ध
ब्राजिल, २ असार (एएफपी)। लियोनेल मेस्सीको कप्तानीमा रहेको अर्जेन्टिना कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गतको आफ्नो पहिलो खेलमा कोलम्बियासँग २–० गोल अन्तरले पराजित भएको छ । विगत २० वर्षमा पहिलो पटक कोलम्बियासँग अर्जेन्टिना पराजित भएको हो । यस खेलमा कोलम्बियाका लागि रोजर..
भारत विरुद्ध पाकिस्तानले पहिले बलिङ गर्ने १ असार २०७६, आईतवार १५:०९
इंगल्याण्ड, १ असार । इंगल्याण्डमा जारी विश्वकप एक दिवसीय क्रिकेट अन्तर्गत आज भारत र पाकिस्तान भिड्दै छन् । म्यानचेष्टरमा हुने खेलमा पाकिस्तानले टस जितेर पहिले बलिंग गर्ने निर्णय गरेको छ । बर्षाले खेल बिथोल्न सक्ने भएकोले पाकिस्तानलाई टस जित्दा ठुलो फाइदा भएको छ । भारतको तर्फबाट..
कोपा अमेरिकामा अर्जेन्टिनाको खराब सुरुवात, पहिलो खेलमै पराजित
ब्राजिल, १ असार । ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगीताको आफ्नो पहिलो खेलमा अर्जेन्टिना पराजित भएको छ । अन्तर्गत समूह ‘बी’ को पहिलो खेलमा अर्जेन्टिना कोलोम्बियासँगा २–० ले पराजित भएको हो । पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको खेलमा दोस्रो हाफमा कोलोम्बियाले २ गोल गर्दै..
विश्वकप क्रिकेटमा भारत र पाकिस्तान खेल्दै, वर्षातले प्रभावित पार्न सक्ने
इंगल्याण्ड, १ असार । इंगल्याण्डमा जारी विश्वकप एक दिवसीय क्रिकेटका चार खेल वर्षातका कारण रद्द भएका छन् । भारत र पाकिस्तानबीच आइतबार दिउँसो हुने खेल पनि वर्षाले अवरुद्ध हुने सम्भावना बढेको छ । म्यानचेष्टरमा दिउँसो ३ः१५ बजे हुने खेलमा वर्षा वाधक बन्न सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ ।..
विश्वकप क्रिकेटमा श्रीलंकाविरुद्द अष्ट्रेलियाको शानदार जित
लन्डन, १ असार । विश्वकप क्रिकेट २०१९ को २० औं खेलमा अष्ट्रेलियाले श्रीलंकालाई पराजित गरेको छ । लन्डनको केनिग्टन ओवलमा भएको खेलमा श्रीलंकालाई अष्ट्रेलियाले ८७ रनको अन्तरले पराजित गरेको हो । क्याप्टेन आरोन फिचको १५३ रनको शानदार पारिले अष्ट्रेलियाले श्रीलंका बिरुद्द सहजै जित हात..
कोपा अमेरिका फुटबलमा ब्राजिलको विजयी सुरुवात ३२ जेष्ठ २०७६, शनिबार ०९:४४
ब्राजिल, ३२ जेठ । घरेलु मैदानमा सुरु भएको कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगीतामा ब्राजिलले विजयी सुरुवात गरेको छ । शनिबार विहान भएको उद्घाटन खेलमा बोलिभियामाथि ३–० गोल अन्तरको जित निकाल्दै ब्राजिलले विजयी सुरुवात गरेको हो । ९ औं पटक उपाधि जित्ने अभियानमा रहेको ब्राजिललाई जिताउन फिलिपे..
नुवाकोट गोल्डकपको उपाधि घरेलु टोलीलाई
जमुना गजुरेल विदुर, ३१ जेठ । नुवाकोटमा सम्पन्न दोस्रो नुवाकोट गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि घरेलु टोली नुवाकोट–११ ले जितेको छ । आज भएको फाइनल खेलमा नुवाकोट–११ ले सङ्कटा क्लब काठमाडौँलाई टाइब्रेकरमा ५–३ गोलले पराजित गरी उपाधि हात पारेको हो । नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको..
इंग्लिस प्रिमियर लिगको खेलतालिका सार्वजनिक ३० जेष्ठ २०७६, बिहीबार १५:०९
काठमाडौँ, ३० जेठ । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ । सन् २०१९÷२० का लागि बिहिबार खेल तालिका सार्वजनिक भएको हो । खेलतालिका अनुसार उद्घाटन खेलमा च्याम्पियन्स लिगको विजेता लिभरपुल र नर्विच सिटीबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । खेल २०१९ का अगष्ट ९ मा हुनेछ..
विश्वकप क्रिकेटमा अष्ट्रेलियाद्वारा पाकिस्तान पराजित
इङ्ल्याण्ड, ३० जेठ । आईसीसी विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगीता अन्तर्गतको १७ औं खेलमा पाकिस्तान अष्ट्रेलियासँग पराजित भएको छ । डिफेन्डिङ च्याम्पियन अस्ट्रेलियाले पाकिस्तानलाई ४१ रनले पराजित गरेको हो । अष्ट्रेलियाले दिएको ३०८ रनको लक्ष्य पछ्याएको पाकिस्तानले ४५.४ ओभरमा सबै विकेट..
नुवाकोट गोल्डकप फुटबलः सङ्कटा फाइनलमा
बिदुर, ३० जेठ । नुवाकोटमा जारी ‘दोस्रो नुवाकोट गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता’अन्तर्गत आज भएको खेलमा सङ्कटा फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । सेमिफाइनलमा सङ्कटाले च्यासल युथ क्लबलाई सडनडेथमा ७–६ गोलले पराजित गरेको हो । आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको खेल मैदानमा भएको सेमिफाइनलमा निर्धारित समयमा..
सुनको भाउ तोलामा २ सयले घट्यो
२६ असार २०७७, शुक्रबार १२:३३
पानीको बहाव बढेपछि सप्तकोशीका ३२ ढोका खोलिए
भारतीय च्यानलको अशिष्ट प्रसारणबारे प्रेस काउन्सिलले पठायो भारतमा पत्र
२६ असार २०७७, शुक्रबार ११:५२
जंगी अड्डाको फुटबल मैदानमा बनाएको पूर्वाधार एन्फाद्वारा हस्तान्तरण
२६ असार २०७७, शुक्रबार ११:४८
भारतीय गुप्तचर प्रमुखहरु काठमाडौँमा, कहाँ बस्दैछन् ?
काठमाडौँ, २५ असार । भारतले आफ्ना सुरक्षा र गुप्तचर संस्थाका अधिकारीहरुलाई काठमाडौं पठाएको पाईएको छ । नेपालको सत्तारुढ दल नेपाल..
सिन्धुपाल्चोकमा बाढीः २ जनाको मृत्यु, १८ जना बेपत्ता
रासस, सिन्धुपाल्चोक, २५ असार । अविरल वर्षासँगै गएको पहिरोले सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिकाको जम्बुमा दुई..
पुरुष उत्पीडन:हिंसाको चपेटामा पुरुषपनि(दोश्रो श्रृङ्खला)
पितृसत्तात्मक पुरुष प्रधान समाजमा पुरुष हिंसा पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा सोच्नु नै अनौठो लाग्न सक्छ। नेपाल जस्तो..
मन्त्री भट्टराईको प्रश्न, ‘विग्रह ल्याउन खोज्ने भारत ठीक कि मिलाउन खोज्ने चीन ?’
काठमाडौँ, २४ असार । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र देखिएको विवाद समाधानमा चिनियाँ राजदूत..
उपत्यकाका ३ जिल्लामा २६७ जना कोरोना संक्रमित
काठमाडौँ, २३ असार । काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमितहरुको संख्या २६७ पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका..